Airbus က ထျန်းကျင်းမြို့တွင် A321 လေယာဉ်ထုတ်လုပ်မည် - Xinhua News Agency
Airbus ကုမ္ပဏီက ၎င်း၏ Final Assembly Line Asia (FAL Tianjin) အား ထျန်းကျင်းမြို့တွင် ချဲ့ထွင်ခြင်းဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံ၌ A321 single-aisle လေယာဉ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် လွှဲပြောင်းခြင်း ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း Airbus China က နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။Airbus နှင့် တရုတ်နိုင်ငံမှ မိတ်ဖက်များသည် လက်ရှိတွင် FAL ထျန်းကျင်း၏ ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းကို တိုးချဲ့ခြင်းနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ A321 လေယာဉ်ထုတ်လုပ်ရန် လက်ရှိ A321 မိသားစု တပ်ဆင်ခြင်းအဆောက်အအုံများ သေချာမှုရှိခြင်းဆိုင်ရာ မူဘောင်သဘောတူညီချက်အား မကြာသေးမီက လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း Airbus China က ပြောခဲ့သည်။
လုပ်ငန်းများအား ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် စတင်ဆောင်ရွက်ရန် လျာထားပြီး စက်ရုံတိုးချဲ့ခြင်း၊ အဆောက်အအုံများနှင့် ကိရိယာ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သင်တန်းပေးခြင်းများလည်း ပါဝင်မည် ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းသစ်သည် FAL ထျန်းကျင်း၏ ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းကို သက်ရောက်မှုရှိမည်မဟုတ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းသို့ အပြောင်းအလဲသည် A321 စီးရီး single-aisle လေယာဉ်အတွက် ကမ္ဘာ့ဈေးကွက် အထူးသဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံဈေးကွက်မှ တောင်းဆိုမှုနှင့် ကိုက်ညီရန် ရည်ရွယ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ Airbus နှင့် တရုတ်နိုင်ငံကြား စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ထောက်ပံ့မှုကွင်းဆက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ချဲ့ထွင်ခြင်း၌ အရေးပါသော တိုးတက်မှုလည်း ဖြစ်ကြောင်း Airbus China ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးအရာရှိချုပ် Michel Tran Van က ပြောခဲ့သည်။
Airbus သည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း A320 မိသားစု လေယာဉ်အစိတ်အပိုင်းတပ်ဆင်ရေး အဆောက်အအုံ လေးခုရှိကြောင်း၊ ယင်းတို့မှာ ပြင်သစ်နိုင်ငံ Toulouse မြို့၊ ဂျာမနီနိုင်ငံ ဟမ်းဗတ်မြို့၊ တရုတ်နိုင်ငံ ထျန်းကျင်းမြို့နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ အလာဘားမားပြည်နယ်တို့တွင် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဟမ်းဗတ်မြို့နှင့် အလယ်ဘားမားပြည်နယ် မိုဘီးလ်မြို့ရှိ အဆောက်အအုံများတွင် A321 ထုတ်လုပ်မှု ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်း သိရသည်။
ဥရောပ လေယာဉ်ထုတ်လုပ်သူ Airbus သည် A321 ဈေးကွက်တောင်းဆိုချက်နှင့် ကိုက်ညီစေရန် ၎င်းနေရာများ၌ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများအား အဆင့်မြှင့်တင်လျက်ရှိသည်။
Airbus သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်က တရုတ်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ထျန်းကျင်းမြို့တွင် Airbus A320 မိသားစု လေယာဉ်အစိတ်အပိုင်းတပ်ဆင်ရေးလိုင်းကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မကုန်မီ Airbus တွင် ၎င်းစက်ရုံမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး လေယာဉ် ၅၀၀ ကျော် တပ်ဆင်နိုင်ခဲ့ကာ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Airbus သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံသို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး လေယာဉ် စုစုပေါင်း ၉၉ စင်း လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီး ယင်းပမာဏမှာ နှစ်စဉ်ကမ္ဘာတစ်ဝန်း လွှဲပြောင်းပေးမှု၏ ၁၇.၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်း Airbus China အဆိုအရ သိရသည်။ (Xinhua)
BEIJING, Nov.5(Xinhua) — Airbus will produce and deliver the A321 single-aisle aircraft in China by expanding its Final Assembly Line Asia in Tianjin (FAL Tianjin), Airbus China said on Friday.
The move aims to meet global market demand for the A321 series single-aisle aircraft, particularly from the Chinese market. It marks significant progress between Airbus and China in expanding industrial and supply chain cooperation,” said Michel Tran Van, chief operating officer of Airbus China.
Airbus deliveredatotal of 99 commercial aircraft to China in 2020, representing 17.5 percent of its annual global deliveries, according to Airbus China. Enditem
Photo : A staff member works at Airbus’ Tianjin final assembly line for the A320-family of jets in north China’s Tianjin, Sept. 27, 2018. From the time it was established in 2008 until the end of this August, the Tianjin final assembly line assembled and deliveredatotal of 378 A320s. (Xinhua/Li Ran)
(CIIE) စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် တရုတ်နိုင်ငံတကာသွင်းကုန်ပြပွဲအား လေ့လာကြည့်ရှုခြင်း